Ikhambi lokugqashula amaketango enhlupheko likuwena muntu - Bayede News
Home » Ikhambi lokugqashula amaketango enhlupheko likuwena muntu
Okwenzeka kwaboHlanga kulezi zinsuku, ikakhulukazi kubantu abasha, kuyadabukisa kakhulu. Abantu bakithi bakhethe impilo yokucela kanye nokukhangeza kunokuthi kube khona abakwenzayo.
Angiluboni olubi ekuceleni usizo kodwa kukhona izinto ongadingi ukuthi uzicele kumuntu. Ezinye zezinto zidinga uzibuze kaningi ngaphambi kokuthi uzicele. Kunezinto ezilimaza isithunzi sakho uqobo uma uzicela futhi okungamele ngabe ukhangeza isandla uma ufuna zona. Angifisi ukuzwakala njengomuntu ongenalo uzwelo futhi nophakeme kodwa ngifisa sicebisane ikakhulukazi kulesi simo somnotho esibhekene naso.
Ngike ngaphila ngokukhangeza kanye nokufuna ukudatshukelwa ngaso sonke isikhathi futhi ngiyakwazi ukweswela. Okwakubuhlungu ngokuhlupheka kwami ukuthi ngangingahlupheki kodwa ngadedela ingqondo yangitshela ukuthi ngiyahlupheka.
Ngavumela ukwehluleka kwengangikuzama kukhohlise ingqondo, kuyitshele ukuthi ngiyahlupheka. Uma ngibheka emuva ngizibuza ukuthi yini lena eyayingenza ngicabange ukuthi ngiyahlupheka, ngithole ukuthi ukwehluleka ukucabanga kanye nokungazethembi. Ukungazethembi kanye nokuvilapha ukucabanga kwami kwangenza ngahlupheka nayo imfundo.
Sifike kanjani lapho sesikhangezela yonke into nesingakwazi ukuzenzela thina? Bangakhi abantu obaziyo, ngaphandle kwakho, abahlupheka beyitholile imfundo, benazo izandla nezinyawo? Kusho ukuthini kuwe lokho? Sifike kanjani lapho yonke into siyicela kuHulumeni? Kushonephi ukuziqhenya nokuzigqaja kubantu bakithi? Kunezinto okumele kube yihlazo ukuthi sishisa amathayi nemigwaqo ngoba sifuna uHulumeni asinike zona.
Iphuzu elisemqoka, engifisa uhambe nalo kulesi siqephu, ukuthi sasingadalelwanga ukuncela izithupha. Isizwe saboHlanga asikaze sihlupheke ngaphambilini ngoba sasibambene futhi sikhuthele.
Yini oyenzayo empilweni yakho njengamanje engathuthukisa wena kanye nomphakathi okuwo? Uma kungekho, yini inkinga? Kungabe ukweswela imali? Kungabe ukweswela ithuba? Lena yimibuzo engifisa uzibuze yona futhi uziphendule ngokweqiniso.
Ungakhohlwa ukuzibuza ukuthi yimuphi umthelela onawo kulesi simo ozithola ukuso njengamanje. Esikhathini esiningi siye sikhombe omunye esweni kanti inkinga ikuwe nqo!
Ngiyobe angilenzanga iqiniso uma ngingakushiyi nendlela yokuphuma kulesi simo okuso, isimo sokukhangeza ngaso sonke isikhathi.
Angifuni ukufana nalaba abazibiza ngabakhuthazi, abakutshela ukuthi vuka uguqule impilo kodwa bangakutsheli ukuthi yiguqule kanjani. Ngicela uhlale phansi wenze lokhu okulandelayo:
Zibuze kabanzi ngalesi simo okuso njengamanje. Zibuze imibuzo efaka phakathi ukuthi ufike kanjani lapho ukhona? Izimpendulo zaleyo mibuzo zizokunika inkinga yakho ngqo!
Zibuze ukuthi yini ongayenza ukuze uphume kulesi simo okuso? Ngifisa ukuthi ungacabangi into ekude ngoba impendulo yezinkinga zethu ihlezi iseduze kwethu. Imali yebhizinisi ofuna ukuliqala ikhona, idinga wena ukuthi ucabange. Ngithe kubafundi bami ejele laseWestville, abadingi ukuthi bayosebenza ngoba kuzoba nzima ukuthola umsebenzi ngenxa yamacala abawenza. Kodwa akusho ukuthi ngeke bakwazi ukuziphilisa ngezinto ezifaka phakathi ukuwasha izimoto kanye nokudayisa.
Uma usuthole ukuthi yini inkinga yakho, wathola ukuthi yini ongayenza ukuguqula isimo, ngifisa uzibuze ukuthi bangakhi abantu ongabasiza ubabonise indlela ophume ngayo kule nhlupheko okuyo noma obewukuyo. Isizathu esenza ngicele ukuthi uchushise nabanye ukuthi izwe lakithi ligcwele inhlupheko ngenxa yokuthi asifuni ukusizana. Umuntu uthi angathola ikhambi le nto ethize azigcinele yena yedwa. Angisho ukuthi phisana ngento okumele ngabe uziphilisa ngayo kodwa ngithi uma kumele usidayisele, sidayisele ikhambi lokuguqula impilo yethu.
Elokugcina ngifisa ukukukhumbuza ukuthi wawungadalelwanga ukuhlupheka ngoba impumelelo noguquko okufisayo kukhona futhi kulapho ukhona. Uma ungangikholwa hlala phansi uzibuze ukuthi bangakhi abantu abanezinkinga abafisa ukuthi bathole izimpendulo zazo? Impumelelo yakho isekuxazululeni lezo zinkinga kanye nokuletha izimpendulo zezinkinga zabo.
nguSanele Gamede Nov 20, 2020